श्री इन्भेष्टमेन्टको २ लाख ७७ हजार कित्ता संस्थापक सेयर फेरि लिलामीमा, कस-कसले पाइन्छ भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » श्री इन्भेष्टमेन्टको २ लाख ७७ हजार कित्ता संस्थापक सेयर फेरि लिलामीमा, कस-कसले पाइन्छ भर्न ?
काठमाडौं - चैत २८ गतेदेखि श्री इन्भेष्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीले संस्थापक समूहको २ लाख ७७ हजार ९९६.५३ कित्ता सेयर पुनः लिलामीमा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । अब यसमा सर्वसाधारण व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । लिलामीमा वैशाख ५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसभन्दा बढी भाउ तोकी निवेदन दिनुपर्नेछ । न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नारायणचौर नक्साल, काठमाडौं तथा श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं र विराटनगर, भैरहवा शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, सिद्धार्थ बैंकको विरगञ्ज, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । हाल यस फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ३४ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ । हकप्रद र बाँकी सेयर लिलामीमा बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी ६३ करोड २१ लाख ७१ हजार ४३२ रुपैयाँ हुनेछ ।